भारतीय शहीद भगत सिंहको त्यो ऐतिहासिक घोषणा
२०७७ चैत्र १० गते , मंगलवार प्रकाशित
‘‘हामी घोषणा गर्दछौं कि एउटा युद्ध चलिरहेको र यो युद्ध त्यतिबेलासम्म चालु रहनेछ जबसम्म केही शक्तिशाली ब्यक्तिहरुले भारतीय श्रमजीबी जनतालाई र तिनको आमदानीका साधनहरुलाई लुटिरहन्छन्। ती लुटेराहरु भलै शुद्ध अग्रेज पूँजीपति हुन् या शुद्ध भारतीय पूँजीपति या दुबै मिलेका हुन्, यी सबै कुराबाट हामीलाई कुनै फरक पर्दैन ।’’
यी भारतीय जनताका ती महान अमर शहीद भगतसिंहका १९३१ का दिन अत्याचारी अग्रेज शासकहरुले फाँसीको तख्तामा झुण्ड्याइएका थिए । तर भगत सिंह, राजगुरु र सुखदेब जस्ता क्रान्तिकारीले सोचेको स्वाधीनता भारतमा आएको छ आज पनि यो प्रश्न उठिरहेको छ ।
भगत सिंहरुले शहादत प्राप्त गरेको पनि ९० बर्ष भइसकेको छ । अनि अग्रेजले भारत छोडेको पनि ७४ बर्ष पुगिसकेको छ । तर भगत सिंह, राजगुरु र सुखदेब जस्ता क्रान्तिकारीले सोचेको स्वाधीनता भारतमा आएको छ ? आज पनि यो गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । के भारतमा मानिसद्वारा मानिसमाथि हुने शोषण उत्पीडन समाप्त भएको छ जसको लागि उनीहरु उच्च सहाश र गर्बोन्नत भएर फाँसीमा ती बीर शहीदहरु झुण्डिएका थिए ? वास्तवमा बिल्कुलै ती बीर शहीदलहरुले सोचेजस्तो स्वाधीनता भारतमा आएको छैन । आज पनि त्यहाँ गुलामी कायमै छ ।
आज पनि भारतीय श्रमजीबी जनतामाथि बर्बर किसिमले लुटखसोट मच्चाइएकै छ । श्रमजीबी मजदुर, किसान, महिला, आदिबासी सबैको खुन पसिना चुसेर स्वदेशी, बिदेशी पूजीजीबीहरुको थैलो भरिदैछ । न्यून आय बर्गका मानिसहरु जीन्दगी भयावह गरीबीकै बीचबाट गुज्रिरहेको छ । उनीहरुले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्ने न्यूनतम स्थिति समेत बिकसित भएको छैन । भारतको स्वाधीनता मूलतः अभिजात बर्गका, धन्नासेठहरुलाई मात्रै आएको छ, भ्रष्ट राजनीतिकर्मी,ठूला कर्मचारीहरुलाई आएको देखिन्छ । उनीहरु भारतीय श्रमजीबीृ बहुसंख्यक जनतालाई लुट्न, जनताको स्वतन्त्र आवाजलाई दबाउन, जनतामाथि गोली लाठी बर्षाउन स्वाधीन छन् । शहीन भगत सिंह लगायतका शहीदहरुले सोचेको जस्तो जनताको स्वाधीनता आउन बाँकी छ ।
सहकारी अभियानकाे ६४ वर्षे यात्रामा के भए उपलब्धी ?
काभ्रे जिल्ला संघको आयोजनामा कृषिको समस्या र समाधान विषयक गोष्ठी